N'ogbe Portal Ụdị Ọkpụkpụ Nchara & Nrụpụta Steel Commercial Office Building Construction Design Steel Structure Structure Structure Mamufacturer and Supplier |Deshion
Ụdị Portal Frame Frame & Steel Structure Commercial Office Building Construction Design Structure Steel ụlọ nkwakọba ihe.
Ngwa:Ụlọ ọrụ ígwè
Ọrụ nhazi:Ehulata, ịgbado ọkụ, ịkpụ
Oge Mbuga ozi:35-45 ụbọchị
Ohere:Window alloy aluminum
Ihe:Q345,Q235 Carbon Steel dị ala
Ibe ígwè:H ọkụ
Ọgwụgwọ elu:Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ Galvanised/ịgba agba
Ime ụlọ & mgbidi:Ogwe Sanwichi/ Mpempe Mpempe Otu Igwe
Asambodo:ISO9001: 2008 / CE / BV
Nhazi eserese:AutoCAD, PKPM, MTS, 3D3S
Site na:Ọnụ ụzọ Roller na-amị amị
Nchegbu ihe owuwu
N'otu ụlọ elu na multi-storey ụlọ na n'ozuzu owuwu, na-ekpo ọkụ na-akpọrepu ígwè, welded ígwè, oyi-kpụrụ mkpa-walled ígwè, profiled ígwè mpempe akwụkwọ na mkpa-walled ígwè ọkpọkọ na-emi esịnede dị ka isi weighted components, adopts ìhè ụlọ na. mgbidi ígwè Ọdịdị.Portal isiike okpokolo agba bụ ụdị nhazi nchara kachasị ewu ewu.
Isi ihe arụrụ arụ nke okpomoku siri ike nke portal bụ etiti ọnụ ụzọ, ọ nwere ike ịbụ otu ogologo, ọtụtụ ogologo na nhazi nke ọtụtụ oyi akwa.
Ogologo akụ na ụba nke portal siri ike etiti dị ihe dịka mita 24-30.
Ndị isi nhazi akụkụ nke portal rigid frame bụ tumadi H-beams na enwere ike ịhazi ya dị ka akụkụ obe na-agbanwe dịka ọnọdụ ike siri dị.Ọ bụrụ na nrụgide ahụ ka ukwuu, a pụkwara iji ogidi lattice ma ọ bụ ihe mkpuchi ụlọ mee ihe.
Njikọ nke nhazi etiti ọnụ ụzọ
Akwa ike bolts na-ejikarị jikọọ structural òtù nke portal isiike etiti, Ya mere, na-ewu ọsọ bụ ngwa ngwa na àgwà dị mfe iji hụ, ịgbado ọkụ na saịtị kwesịrị izere dị ka o kwere mee.
Nkwụsi ike n'èzí nke onye otu mkpakọ
Nkwụsi ike nke ndị na-ahụ maka ụlọ elu adịghị mma, ọ dị mkpa ịgbakwunye ihe nkwado nkuku na purlin ụlọ iji mepụta usoro nkwado ma hụ na nkwụsi ike nke flange mkpakọ.
Ụkwụ kọlụm nke nhazi etiti ọnụ ụzọ
A na-ejikọta etiti ahụ siri ike nke portal site na ntọala kọmpụta na bolts arịlịka.Dị ka ndokwa nke bolts, ọ nwere ike kewaa n'ime hinge na isiike.Mgbe enweghị ụgbọ ala truss, a na-ekwupụtakarị ya, ma ọ bụ jikọọ ya nke ọma
Echichi nke portal okpokolo agba siri ike
Ọ na-adịkarị obere ịdị elu yana ngwa ngwa ngwa.Njikọ saịtị ahụ agbachiri, yabụ ụdị nrụnye injinịa a dị mfe.
A na-ejikarị ụgbọ ala ebuli ihe owuwu Portal siri ike site na ala na tonnage crane anaghị adịkarị karịa 50T.
Steel Ọdịdị ụlọ bụ otu ụdị ngwaahịa nke nwere ike imewe dị ka kwa ndị dị iche iche need.so, ma ọ bụrụ na ị chọpụtara na ndị na-esonụ ihe atụ foto bụ otu ihe ahụ dị ka gị chọrọ, ọbụna na ọ bụ nnọọ iche.
Echegbula onwe gị, n'agbanyeghị ụdị ụlọ ị chọrọ, ibu, obere ma ọ bụ multi-storey, dị nnọọ gwa m data ma ọ bụ ịbịaru nke ụlọ ihe ị chọrọ. Anyị ga-eme ka kpọmkwem imewe, nhota na nsụgharị maka gị ozugbo anyị. nwere ike.
Anyị factory nwere ihe karịrị 10years ahụmahụ na ígwè Ọdịdị, na anyị isi engineer nwere banyere 18years ahụmahụ na ígwè Ọdịdị ụlọ.
N'ihi ike ya dị elu, ịdị arọ dị arọ, oge a na-ewu ngwa ngwa, ezigbo ọrụ seismic na uru ndị ọzọ, a na-ejikarị usoro ígwè eme ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ámá egwuregwu, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ oloko, ebe ngosi, ụlọ elu na ubi ndị ọzọ.
Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ihe owuwu ígwè na-ewu na-abawanye.
Dabere na njirimara nrụgide nhazi, ụlọ ihe owuwu ígwè nwere ike kewaa nke ọma ka ọ bụrụ ihe owuwu ọnụ ụzọ ámá siri ike, nhazi oghere, usoro grid na nhazi ụlọ ọtụtụ.
Oke nke ụdị nhazi na oru ngo adịghị akọwapụta nke ọma, na-agụnye ọtụtụ ụdị nhazi.
H beam Structure ụlọ nkwakọba ihe
1) Isi igwe Q345, Q235, Q345B, Q235B wdg.
2) Kọlụm & Beam Nke agbadoro ma ọ bụ Hot akpọrepu H-ngalaba
3) Usoro njikọ nke nhazi ígwè njikọ ịgbado ọkụ ma ọ bụ njikọ bolt
4) Mgbidi & ụlọ EPS, Rockwool, PU Sanwichi, corrugated ígwè mpempe akwụkwọ
5) Site na Ọnụ ụzọ akpọchiela ma ọ bụ ọnụ ụzọ na-amị amị
6) Window Plastic ígwè ma ọ bụ Aluminom alloy window
7) Elu Ịminye ọkụ na-ekpo ọkụ galvanized ma ọ bụ tee ya
8) kreenu 5MT, 10MT, 15MT na ndị ọzọ
Eserese & Nkwupụta okwu
1) A na-anabata imewe ahaziri ahazi.
2) Iji nye gị nkọwa na eserese kpọmkwem, biko mee ka anyị mara ogologo, obosara, elu eave na ihu igwe mpaghara.Anyị ga-ehota gị ozugbo.
2. Ụlọ na mgbidi Sanwichi panel usoro
7. Ụlọ nke abụọ
Nhazi ụlọ nkwakọba ihe nchara
1. Steel Ọdịdị ewu àgwà ìhè, elu ike, span.
2. Oge ihe owuwu nke ihe owuwu ígwè dị mkpụmkpụ, a na-ebelatakwa ego ntinye ego n'ihi ya.
Ọdịdị 3.Steel nwere nnukwu ọkụ na-eguzogide corrosion.
4.Steel Ọdịdị ụlọ na-akpali mfe na ọ dịghị mmetọ bụ natara.
Nkwakọ ngwaahịa ihe nkiri plastik
Ụgbọ njem ụgbọ mmiri buru ibu
Ụlọ nkwakọba ihe nke Steel Prefab
1. Kwadebe Ihe
4.Automatic Sub-merged Arc ịgbado ọkụ
6. Akụkụ Welding
Nyocha ịgbado ọkụ
Nyocha ịgbado ọkụ nke Ultrasonic
Ịgbasa nyocha agba
Nnwale ịdị arọ
Q: Gịnị bụ àgwà mmesi obi ike ị nyere na kedu ka ị na-achịkwa àgwà?
A: Ewubere usoro iji lelee ngwaahịa n'oge ọ bụla nke usoro nrụpụta - akụrụngwa akụrụngwa, ihe eji arụ ọrụ, ihe enwetara ma ọ bụ nwalere, ngwaahịa emechara, wdg.
Ajụjụ: Ị na-enye ntinye nduzi na saịtị esenidụt maka ụlọ nkwakọba ihe?
A: Ee, anyị nwere ike ịnye ọrụ ntinye, nlekọta na ọzụzụ site na mgbakwunye.Anyị nwere ike izipu anyị ọkachamara teknuzu engineer na-elekọta echichi na saịtị esenidụt.Ha enweela ihe ịga nke ọma n’ọtụtụ mba, dị ka Iraq, Dubai, South Africa, Algeria, na Ghana.
Ajụjụ: Gịnị bụ isi ahịa gị?
A: N'ịbụ ndị na-eduzi ọhụụ zuru ụwa ọnụ, a na-ebuga ngwaahịa anyị n'ọtụtụ mba na mpaghara nwere àgwà ọma ya na ezigbo ọrụ, dị ka France, UAE, South East Asia, Africa na na.Anyị ga-enwe obi ụtọ guzobe ezi azụmahịa imekọ ihe ọnụ na gị n'ọdịnihu dị nso.
Ajụjụ: Otu esi ebu ngwaahịa?
A: Anyị na-eji ngwugwu ọkọlọtọ.Ọ bụrụ na ị nwere ihe ngwugwu pụrụ iche chọrọ, anyị ga-ebukọta dị ka achọrọ, mana ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ ahụ.
Nke gara aga: Oghere Frame Steel Truss Stadium Steel Structure & Steel Roof Structure
Osote: Ihe owuwu Grid Steel Polycarbonate Skylight House Glass Dome Roof Cover / Prefab Grid Steel Space Frame Structure